Ejipta: Manampy trotraka ny olam-pirenena ny tsy fisian’ny Hashish · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2010 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, عربي, Español, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, English
Niharan’ny fahasahiranana ara-tsakafo, lasantsy, ary gazy fandrehitra ny Ejiptiana farany teo. Nefa koa mbola voakapoky ny krizy mavesatra kokoa, dia ny tsy fahampian’ny zava-maha-domelina Hashish (cannabis). Voarara araka ny lalàna ejiptiana ny fanjifana Hashish, sy ny rongony amin’ny ankapobeny , nefa toa hita fa mihanaka saiky manerana ny firenena ny fampiasana an’ io ary maro ny mponina iharan’ny krizin’io.
Wahda Masreya, about the hash crisis and how she thinks it's really effecting the Egyptian citizens:
Nanoratra eto i Wahda Masreya, mikasika ny krizina hash ary nilaza ny fiantraikan'izany amin'ny teratany Ejiptiana :
Araka ny hevitro, krizy mafy indrindra ny krizina rongony raha oharina amin’ny krizy hafa. Tsy hanakana ny ejiptiana tsy hifoka rongony mba hanadinoany ny olana ao aminy sy ny filàny ary ny fahantrany ny fanamparam-pahefana ataon’ny fitondrana.
Notsipihiny avy eo ny antony mahatonga ny mponina hifoka rongony, sy ny hoe ahoana no lasa iraisan'ny sokajy samihafa sy fiaraha-monina samihafa izy io. Manoratra izy:
Tsy mifoka hashish, na karazan-drongony hafa aho. Saingy mahafantatra olona avy amina kilasim-piaraha-monina maromaro aho izay manao izany ary fantatro ny lanjan’izany ho azy ireo. Ny sasany mifoka rongony amin’ny alina, raha ny maraina kosa izany ho an’ny hafa alohan’ny handehanana hiasa mba hanadinoany ny fahasiahan’ny mpampiasa azy, ireo raharaham-birao, ny hakelin’ny karama, ary ny fahasorenana azo mandrapaha-hita ny fitaterana rehefa mandeha na miverina avy miasa. Mahafantatra olona sasany aho izay mihinana rongony mihitsy fa tsy mifoka mba hahazakany tsara ny filàna tsy hita fetran'ny vady aman-janany izay tsy azon'izy ireo tanterahana akory.
Faranany amin'ny filazana toy izao ny lahatsorany:
Henjana ny tsy fahampiana, ary angamba mila mpahay ara-toe-karena isika hahafantarana ny fiantraikan'izany amin’ny toe-karena ejiptiana.
Miara-ory amin’ireo ejiptiana aho ary mahatsapa tsara ny fangirifiriany, saingy tsy azoko hafenina ny hafaliako fa farany hifoha amin’ny torimasony ihany ny ejiptiana.
Whazzup Egypt, amin’ny lafiny iray, mandà ny filazana io resaka io ho krizy , ary nanoratra lahatsoratra vaovao tao amin’ny blaoginy mitondra fanamarihana amin'ny lahatsoratr’i Max Strasser tao amin’ny TheFasterTimes izay nantsoiny hoe “Krizin-drongony goavana eto Ejipta ho an'ny 2010“.
Tsy te hieritreritra aho fa izay tsy fahampiana akora iray tsy ara-dalàna no holazaina fa krizy. Saingy ity mpanoratra ity dia mihevitra fa izany no izy ary manana ny heviny mikasika io olana io.
Nofaranany ny lahatsorany amin’ny filazana fa “sarotra ny fiainana ho an’ny ankamaroan’ny olona eto. Avelao izy ireo ho “stoned” [Avy amin'ny mpandika : toraham-bato]– sady tsy ao anaty baiboly/na ny Korany izany:)
Farany, mahatalanjona fa resahina mivelatra kokoa ao anaty fampahalalam-baovao mahazatra ity krizy ity, ary maro ireo Ejiptiana mampiasa forum anaty aterineto mba hahafahana mivarotra izay hash ananany.